Square Enix dia manambara ny Final Fantasy IX ho an'ny iOS, Android ary PC | Vaovao IPhone
Square Enix dia nanambara ny Final Fantasy IX ho an'ny iOS, Android ary PC
Ny taona vaovao dia natomboka tamin'ny vaovao tsara ho an'ny mpilalao indrindra: Square Enix dia nanambara fa hitondra ny remake de Final Fantasy IX antsika iPhone, iPod Touch sy iPad. Ho fanampin'izany, dia handray ny anaram-boninina fahasivy an'ny saga ho Android efa PC ny Ary hanao izany 16 taona aorian'ny fahatongavan'ny Final Fantasy IX amin'ny Sony PlayStation tany am-boalohany, fa miaraka amin'ny sary maoderina kokoa izay ho tsara kokoa anio.
Azo inoana fa ity lalao ity dia tsy hoe hiantso an'ireo nilalao azy tamin'ny fiandohan'ny taonarivo, fa hanintona ireo mpankafy vaovao izay maniry ny hanao ny lalao any am-paosiny foana. Ireo izay efa nahalala ny lalao dia tsy hahita vaovao be, raha tsy mitovy ny tantara mifantoka amin'ny Princess Garnet avy any Alexandria ary ny fakana an-keriny nataon'ny vondrona teatra nokaramaina hamelomana ny tsingerintaona nahaterahany.
Square Enix dia tsy nanambara antsipiriany maro momba izay hitranga amin'ity remake ny lalao angano saingy, raha mijery ny famoahana hafa isika, dia afaka manantena lalao iray saika nifanaraka tamin'ny voalohany niaraka tamin'ny sary nihatsara. Etsy ankilany, ny fanaraha-maso koa dia novaina mba hahafahantsika milalao tsara kokoa amin'ny efijery mikasika, na dia azo inoana aza fa afaka mampiasa isika Mpifehy MFi izay hahatonga ny traikefa hitovy na tsara kokoa noho ny zavatra tsapanay tamin'ny PlayStation voalohany. Ho fanampin'izany, ny lalao dia azo inoana fa ho voatahiry ho azy ihany koa, zavatra izay, raha tsy misy ny fitadidiana, tsy afaka natao 15 taona lasa izay.
Square Enix dia nanambara fa ho avy ny Final Fantasy IX ho avy tsy ho ela amin'ny fitaovana Japoney. Tsy nilaza na inona na inona momba ny fotoana hamelezana tsena hafa izy ireo, saingy tsy tokony ho ela loatra ny fiandrasana. Ny lohateny dia hifanaraka amin'ny iOS 7 na avo kokoa ary Android 4.1 na avo kokoa, fa ny developer kosa dia manoro hevitra fa mety tsy hiasa amin'ny fitaovana Android sasany izy io, angamba noho ny fitaovana voafetra na tsy mifanaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Square Enix dia nanambara ny Final Fantasy IX ho an'ny iOS, Android ary PC
Nanjavona ny fanamafisana ny maha akaiky ny jailbreak ho an'ny iOS 9.2 ...